रक्सी किन पिउने? किन नपिउने ?
इटहरीः सामान्यतया मान्छेहरु खुल्ला रुपमा म रक्सी पिउँछु भन्दैनन् । पिउँदिन भन्दा साथीभाइ पत्याउँदैनन्, कति त आफन्तले पनि विश्वास नै गर्दैनन् । “देश विदेश हिँडेको मान्छे रक्सी पिउँदैन भनेर कसरी पत्याउनु ?” प्राय सबैको एउटै प्रश्न हुन्छ । बेउत्तर हुनेहरुले भन्छन् “पहिला पिउँथे अहिले छोडेको छु ।”
पहिला पहिला रक्सी भन्नेबित्तिकै घरेलु रक्सी मात्र हुन्थ्यो । ठूलो पैसा पर्ने महङ्गा बोतलमा सबैको पहुँच थिएन । दिनभरि श्रम गर्नेहरु पीडा भुलाउन एक गिलास पिउँथे । त्यो एक गिलासले काम गर्ने उर्जा थपिदिन्थ्यो, फेरि काममा जान्थे । रक्सी खानेमा २ थरी मान्छे छन् । केही जनजातिहरुकोमा रक्सी बनाइन्छ, उनीहरुको देवीदेउतालाई चढाउन पनि रक्सी नै चाहिन्छ । अहिले पनि बुढापाकाले भन्छन् नि, ‘रक्सी खान जातले पा’को हुनुपर्छ’ । अहिले जातले पाएको र नपाएको कुरा त्यत्ति लागु हुँदैन । भएपनि रक्सीको सवालमा लागु हुँदैन । अहिले जातले पाएको भन्दा धेरै जातले नपाएकाहरु भट्टिमा भेटिन्छन् । समय परिवर्तनशील र परिष्कृत हुँदै गयो । जातले नपाएको भनिएका पनि पुरुषहरु मात्रै रक्सी पिउँथे । अहिले रक्सी भनिँदैन । अहिले वियर, ह्विस्की, रम, वाइन, टकिला, ककटेल यस्तै के के भनिन्छ । भेराइटि बढेसँगै यसका ग्राहक पनि बढेका छन् ।
अहिले धेरै जसो परिष्कृत परिवारहरु घरमै बसेर परिवारसँगै अल्कोहलको नसामा रमाउँछन् । पुरुष मात्र नभएर महिलाहरु पनि अल्कोहलको रमाइलोमा भुल्छन् । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त यो संख्या धेरै कम छ, तर विदेशमा भने अहिलेको शताब्दीमा हुर्केका महिलाहरु हामीले पिउनुहुँदैन भन्ने धारणामा हुर्केका हँुदैनन् । त्यो संकुचित (न्यारा)े मानसिकता त हामीमा मात्र छ । कतिले अल्कोहललाई मनोरन्जनको रुपमा लिन्छन्, कतिले नसाको रुपमा अनि कतिले चाहिँ अवसरहरुमा साथीसङ्गीसँग साथ मिलाउन हल्काफुल्का चुस्की लिन्छन् । जे जसरी लिए पनि त्यो रक्सी पिएको नै भन्नुपर्यो हाम्रो भाषामा । अल्कोहल अर्थात् रक्सी किन पिउने त ? मान्छेहरुका कहिलेकाहीँ खुसीका अवसरहरु हुन्छन् रमाइलोको लागि पिइन्छ । कसैको पहिलेदेखि पिउने बानी हुन्छ, त्यो नसाजस्तै बनेको हुन्छ, उनिहरु नपिइकन बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् र पिउँछन् । पिउँदा कतिले पीडा भुल्ने बाहाना बनाउँछन्, कति मिठो निन्द्राको लागि पिउने गरेको बताउँछन् । जे जसरी पिउने भएपनि पिउनेहरु रक्स्याहा अथवा जँड्याहा हुन् हाम्रो समाजको लागि । तर समाजमा भएका हामी र हामीजस्तै अरु मनिसहरु हुन समाज विस्तारै परिवर्तनकै दिशामा गएको भएर पनि बेलाबखत हुने पार्टिहरुमा हल्का पिउनुलाई नराम्रो मान्न छोडिएको छ ।
हाम्रै समाजमा पनि कतिपय शिक्षित परिवारहरु त पारिवारिक भेलामा सबै एकै ठाउँमा बसेर आफ्नो आफ्नो च्वाइसको ब्राण्डसमेत पिउने गरेका छन् । यो सबै समाज परिवर्तनको उपहार हो हाम्रा लागि । हुन त हामीसँग एउटा संकिर्ण (कन्जस्टेड) समाज पनि छ । जसले पिउनै हुँदैन भन्छ । शङ्कालु मानसिकता छ कहिँकतैबाट आउँदा पनि रक्सी नै पिएर आयो भनिन्छ । कतिले त रक्सी नपिएपनि घर आउन विविध कारणले ढिलो भयो भने रक्सी पिएर आएको भनेर घरवालीको खप्की खानुपर्छ । नपिउनेले पिउने मान्छेको सङ्गत गर्न पनि भएन । सँगै हिँड्यो भने पनि पिउनै हिँडेको भन्ने शङ्का हुन्छ । अब शङ्कैशङ्काले लङ्का जलाउन पनि कुनै बेर लाग्दैन । अब प्रश्न आउँछ, किन पिउन हुँदैन त अल्कोहल ? अल्कोहल मादक पदार्थ हो । यसले हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्नासाथ रगतलाई बिस्तारै सक्रिय बनाउँदै लान्छ । पिउँदै गएपछि नशाहरुलाई सुस्त बनाउँदै लान्छ र हामी बेहोस हुँदै जान्छौँ । मदहोसी भएपछि के के हुन्छ, नहुनुपर्ने कामहरु पनि हुन्छ, फलस्वरुप कतिपय ठाउँमा लज्जित भएर बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ ।
अल्कोहल एक प्रकारको नसा भएको कारणले यसको दिनहुँ सेवनले अल्कोहल नभइकन हुँदै नहुने अवस्थामा पनि पुर्याउन सक्छ । अल्कोहलको सेवनले हाम्रो कलेजोमा असर गर्ने चिकित्सकहरुको भनाइ छ । यसको सेवन गर्दै गर्दा पर्याप्त मात्रामा पानी पिउन सकेन भने हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने पानीको अभाव हुन जान्छ, फलस्वरुप विभिन्न प्रकारका रोगहरु शरीरभित्रै उब्जिन थाल्छन् । नसाको रुपमा लिएर यसको दिनहुँ सेवन गर्दा दीर्घकालीन रोगहरु लाग्ने भएकाले यसको सेवन सीमित मात्र राम्रो हो । कहिलेकाहीँ अवसरको रुपमा मात्र पिउँदा पनि कति पिउँदा आफू ठीक छु र तन्दुरुस्त छु भन्ने लाग्छ, त्यति मात्रामा मात्र पिउनुपर्छ । अवसरहरुमा म त पिउँदिन भनेर परै बस्नभन्दा ठीकै छ एक चुस्की लिँदा के फरक पर्छ र भन्ने हिसाबले थोरै पिउनुलाई नराम्रो मानिँदैन ।